Posted by Ektaare at 9:57 AM 1 comment:
साथीले बडो माया गरेर एकथान ब्लुटुथ हेडसेट पठाइ दिए । बडो गजबको चीज भेटिएजस्तो भयो । तार नलाग्ने, कानमा लगाएपछि बाहिरको केही नसुनिने । संसारबाट हराउन यो बाहेक केही नचाहिने!
यो सँग राम्रो दोस्ती चलिराथ्यो । रोल्पा जाने बेला लान भुलेछु । लगभग डेढ महिना बक्सा मै थन्कियो ।
Posted by Ektaare at 9:35 AM No comments:
Labels: Blog, Headphones, Sony, गनथन, ब्लग
- लक्ष्मण गिरी
+२ पढ्ने ताकाको कुरा हो। क्यालेन्डरमा वि.स. २०५९ चैत्र थियो । १० कक्षासम्म कृषि पढेको थिएँ । सामान्य धान, गहुँ लगाउन भन्दा बेमौसमी तरकारी खेती गरे फाईदा हुन्छ भन्ने सोचेर घरकै वरिपरि ४ कठ्ठा खेतमा तरकारी खेती गर्न सुरिएँ । अलिअलि अनुभव, सीप, ज्ञान थियो तर पैसा थिएन । के गर्ने?
Posted by Ektaare at 8:10 PM 1 comment:
Labels: Agriculture, Blog, Story, कृषक, कृषि, लेख
तोहार हमार कौन कौन चीज मिलत है?
मन मिलत है
सोच मिलत है
भविष्य कय योजना मिलत है
नाहीँ मिलत है तो
खाली ई नाम कय पिछे आय वाला नाम
पिताजी से जब भेट भए रहा
तब बडे सम्मान से हम
"बुवा नमस्ते" किहे रहेन
ऊ कुछ नाहीँ बोलिन् रहेँ
तूँ ही बाद मे बतायो कि
उ गुस्सा होइ गए रहेँ
"किन मधिसे रोजिस्?"
Posted by Ektaare at 7:25 AM No comments: